Ngwa mgbakwunye AMP na nchịkọta Google - IG
AMP ngwa mgbakwunye na nchịkọta Google
Fanye mkpado <amp-analytics>
Akwụkwọ ikike Generator Accelerated na -achọpụta na akpaghị aka ma arụnyere koodu nsuso Google Analytics na saịtị nke gị wee gụọ NJ Google Analytics tracking ID , ya bụ nọmba UA .
The AMPHTML generator na-amatakwa na enwere ike iji ọtụtụ nọmba UA , dịka ejiri ya, dịka ọmụmaatụ, na 'Multiple Account Tracking' . Onye na-emepụta ihe ntanetị AMP na-akpaghị aka na-atụgharị ọnụọgụ Google Analytics UA niile ka ọ bụrụ mkpado 'amp analytics' ma si otú a na-eme ka nyocha Google Analytics dị na mbụ na ibe AMP!
Site na ụdị nchịkọta Google Analytics a, nyocha nyocha niile nyocha maka ibe AMP na-egosi na nke gị (!) Akaụntụ Google Analytics , yabụ ị ga-anọgide na-anata data nsuso AMP niile anakọtara na ebe a na-emebu!
Onye nrụpụta ntanetị AMP na-akwado ụdị Google Analytics niile ndị a:
Nchịkọta Google 360 ° (analytics.js)
Nchịkọta ụwa (nchịkọta.js)
Nchịkọta Google (ga.js)
Nchịkọta Urchin (urchin.js)
Na mba ụfọdụ (dịka na Germany) a ga-enwerịrị ọnọdụ ọzọ iji nwee ike iji nchịkọta Google yana nrube isi na iwu nchekwa data: Ojiji IP anonymous. N'ihi nke a, Accelerated Mobile Pages Generator na-akwado ọrụ Google Analytics 'anonymizeip' na-akpaghị aka ma setịpụrụ octet ikpeazụ nke adreesị IPv4 ma ọ bụ ọnụọgụ 80 ikpeazụ nke adreesị IPv6 na efu tupu ịchekwa data onye ọrụ. Nke a pụtara na adreesị IP zuru ezu adịghị edepụta na draịvụ ike nke sava Google Analytics!
Google Analytics IP anonymization anaghị arụsi ọrụ ike site na ngwa ngwa Accelerated Mobile Pages, mana ọ bụ ntọala ntọala nke akara 'amp-Analytics' site na akwụkwọ AMPHflix ndị ọrụ .
A na-ebufe data na 'amp-nchịkọta' na-enweghị aha!
Ozi nchịkọta data nchịkọta Google Analytics maka ibe AMP
Iji mee ka mgbakwunye akpaka nke nsuso Google Analytics iji mee ihe na iwu nchedo data, ọ chọrọ nkọwa doro anya na nkwupụta nchedo data nke weebụsaịtị gị!
Na ibe AMP ewepụtara nke a na-enweta site na amp-cloud.de, na njedebe nke ibe AMP ọ bụla, a na-ekwupụta nkwupụta nchekwa data nke amp-cloud.de, nke nwere ozi nchedo data dị mkpa maka nsuso Google Analytics.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji otu n'ime amp-cloud AMP plugins, ị ga-etinye ndetu na nsuso Google Analytics na iwu nzuzo nke weebụsaịtị gị!
amp-cloud.de enweghị ụgwọ ọ bụla maka mmebi iwu ọ bụla, ị ga-enyocha ma hụ onwe gị ma edobere akaụntụ Google Analytics gị na ibe AMP n'ụzọ iwu kwadoro! (Isiokwu: Nkwekọrịta Google Analytics maka ịhazi data nhazi dịka § 11 BDSG ).